အသက် ၂၃ - ထူးဆန်းသောအထီးကျန်ဘဝမှချစ်စရာကောင်းသည့်ကောင်လေးဖြစ်သည့် Your Brain On Porn သို့အသွင်ပြောင်းခဲ့သည်
အသက် ၂၃ - ထူးဆန်းသောအထီးကျန်ဘဝမှချစ်စရာကောင်းသောကောင်လေးအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲလိုက်သည်
ကျွန်တော်ကအိန္ဒိယမှ ၂၃ နှစ်အရွယ်ကောင်လေးတစ်ယောက် ကလေးဘဝတုန်းကငါ့ကိုကျူရှင်ဆရာမကလေးထိုင်စားဖူးတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကငါ့ကိုလိင်စော်ကားခဲ့တယ်၊ သူကငါထက် ၇ နှစ် ၈ နှစ်ကြီးတယ်။
ငါ 14 နှစ်အရွယ်မှာငါသည်ငါ့ရပ်ကွက်အတွင်းကနေမိတ်ဆွေများကိုအသုံးပြုပုံ porn နှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဖို့စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ ပထမတော့ကျွန်မကိုယ့်ကိုကိုယ်မထိသဖြင့်ရရန်အသုံးပြုသည်ဤခံစားမှုအကြောင်းကိုပဲစပ်စုခဲ့ပါတယ်။ ငါကစွဲတယ်။ အစဉ်အဆက်ဒါဆိုကတည်းကငါအရာအားလုံးနဲ့ငါ (စသည်တို့ကိုသတင်းစာများ, DVD, လိင်ပုံပြင်များအတွက်မဂ္ဂဇင်း, pics) အပေါ်မှာငါ့လက်ကို တင်. ဘာမှမှ FAP လေ့ရှိတယ်။
အခုငါပြန်အသက်ရှင်နေပြီဆိုတာကိုသဘောပေါက်လာပြီ။ ဘယ်မိန်းကလေးမှမရှိခဲ့ဘူး၊ လူတွေနဲ့စကားစမြည်ပြောဖို့အခက်တွေ့ခဲ့တယ်။ အမြဲတမ်းရယ်မောနှင့်အတန်းထဲတွင်တစ် ဦး ဟာသလုပ်လေ၏။ လူအပေါင်းတို့သည်အချိန်တိုတောင်းသောဒေါသဖြစ်လေ့ရှိတယ်။ မိဘများထံမှဗီဒီယိုဂိမ်းကစားရန်နှင့်ဆိုက်ဘာကဖေးများမှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုရန်ကျွန်ုပ်ပိုက်ဆံခိုးယူခဲ့သည် (ထိုအချိန်ကကျွန်ုပ်တွင်ကွန်ပျူတာမရှိခဲ့ပါ) ။ ငါအသက် ၁၉ နှစ်အရွယ်မှာနောက်မှငါမကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေစက်ဝိုင်းထဲကိုဝင်လာပြီးအရက်သောက်၊ ဆေးလိပ်သောက်တယ်။
ဒီနေရာမှာဒီဟာကမသင့်တော်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်အခုသိပြီ၊ ဒါပေမယ့်ငါကြိုးစားနေတာက - ငါ့ဘဝကိုမထိန်းချုပ်တော့ဘူး။ ငါဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာမသိဘူး ငါ့ကိုပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကထိန်းချုပ်ထားတယ် ငါသာမန်ဘဝကိုနေနေခဲ့ရတယ်၊ NoFap ကိုငါမတွေ့ခဲ့ရင်ငါဆက်လုပ်မှာပဲ။
ငါ2လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း NoFap စိန်ခေါ်မှုစတင်ခဲ့ပါတယ်။ Reddit ပျေါအကြောင်းကိုသိရန်ရတယ်။ ဤသည် NoFap စိန်ခေါ်မှုမှာငါ့အတတိယကြိုးပမ်းမှုဖြစ်ပါသည်။ နောက်ဆုံးနှစ်ကြိမ် 41 ရက်ပေါင်းနှင့် 85 လက်ထက်၌။
သို့သော်လည်းငါသည်, သောက်ဆေးလိပ်သောက် junk အစားအစာကိုစား, သူတို့အားနောက်ဆုံးနှစ်ခုကြိုးစားမှုပေါ်မှာရှိသမျှသောနေ့ရက်သည်ဗီဒီယိုဂိမ်းများကိုဆော့ကစားလေ့ရှိတယ်။ ငါသည်တကယ့်ကိုအနိမ့် Self-လေးစားခဲ့ရသည်။ ဘယ်က FAP ဖို့မနေ့ရက်တိုင်းခက်ခဲများနှင့်ခက်ခဲရတဲ့ခဲ့သည်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ငါနောက်ဆုံးမှာအတွက်ပေးရမယ့်ခဲ့ကွောငျး, ငါ၏စိတ်ကို၏နောက်ကျောမှာဒီအတွေးရှိခဲ့ပါတယ်။
ဤအချိန်ငါကျန်းကျန်းမာမာအစာစားထွက်အလုပ်လုပ်, ကိုယ်ပိုင်အကူအညီစာအုပ်တွေဖတ်နေတော့တာပဲ။ ငါသညျဤအကျင့်ကိုကျင့်ခံခဲ့ရအဖြစ်, ငါ၏ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုကြီးထွားလာစတင်ခဲ့ပြီးနှင့် NoFap စိန်ခေါ်မှုနေ့ရက်တိုင်းပိုလွယ်လွယ်ကူတယ်။ တူသောစာအုပ်များ ဒါဝိဒ်သည်ဂျေ Schwartz အားဖြင့်ကြီးစဉ်းစား၏ The Magic, စတီဖင် Covey အားဖြင့် Highly ထိရောက်သောပြည်သူ့၏7အလေ့အထများ နှင့်တူသောဘလော့ဂ်များ Actualized.org, ZenHabits ငါ့ကိုကူညီပေးခဲ့သည်။ နှင့်သင်တန်း၏, ဤအ subreddit အပေါ်အောင်မြင်မှုပုံပြင်များလှုံ့ဆျောမှုခံခဲ့ရသည်။
ရက်သတ္တပတ်၏ပထမဦးဆုံးစုံတွဲခက်ခဲခဲ့ကြသည်။ ငါတတိယလတွင်ပထမဦးဆုံးနှစ်လအတွက်5စိုစွတ်သောအိပ်မက်ရှိခဲ့ပါတယ်နှင့်2။ တကယ်တော့ငါရှိခဲ့ပြီးခဲ့သည့်တဦးတည်း 90th နေ့တွင်အတိအကျဖြစ်ခဲ့သည်။ 😀
NoFap အတူလစဉ်လတိုင်းကျွန်မတဦးတည်းကောင်းသောအလေ့အထစတင်တဦးတည်းကငျြ့ဆိုးကန်ဖို့ကြိုးစားပါ။ ငါသေးငယ်တဲ့အပြောင်းအလဲကပ်ဖို့ပိုများပါတယ်ထင်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
ကျွန်ုပ်တွေ့ကြုံခဲ့ရသောလူများအား '' ဟိုင်း '' ဟုပြောခြင်းဖြစ်သည်။
ပိုက်ဆံသိမ်းဆည်းနေသည်။ (ဒီတစျဦးနှင့်အတူကူညီပေးခဲ့သည်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့်အရက်သောက်ဖြတ်။ )
ကျွန်ုပ်၏လူမှုရေးဘ ၀ အနေဖြင့်ယခုလူများနှင့်ဆက်သွယ်နေစဉ်ကျွန်ုပ် ပို၍ စိုးရိမ်ပူပန်မိသည်။ ငါစကားပြောဆိုမှုကိုအမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားပါတယ် ငါလူတွေကိုအခုပိုကောင်းအောင်အကဲဖြတ်နိုင်ပြီ၊ ငါအတွက်ဘယ်လူကောင်းလဲ၊ မကောင်းဘူးဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်။ ငါကလူဆိုးတွေရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကိုမခံတော့ဘူး။ ငါသည်ငါ့အသက်ကိုထိန်းချုပ်ထားတယ်။ 🙂ထိုအခါငါဒီခံစားချက်ကိုကြိုက်တယ်။
ငါမိန်းကလေးများနှင့်ငါ့အတွေ့အကြုံကိုမျှဝေအချိန်အကြောင်းကို၎င်း၏ပုံပါဘဲ။ မိန်းကလေးများနှင့်ကျွန်ုပ်၏အကြီးမားဆုံးပြproblemနာမှာကျွန်ုပ်ကြောက်သည်။ သူတို့ငါ့ကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုတာကိုကြောက်တယ်။ ငါကြည့်ကောင်းပေမဲ့ငါ့မှာဝက်ခြံနဲ့အမှောင်ထုတွေရှိတယ်။ ပြီးတော့မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့စကားပြောတိုင်းသူတို့ကိုငါတကယ်သတိထားမိခဲ့တယ်။ တစ်ချိန်ကသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကအသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှအဆီတွေပြည့်နေပြီလို့ပြောခဲ့တယ်။
အကြောင်း9months ago, ငါထွက်အလုပ်လုပ်စတင်ခဲ့သည်။ ပထမတော့အဆီချွတ်အကြောင်းကို6လကြာ cardio လုပ်နေတာ။ ကြွက်သားအဆောက်အဦးများနှင့်3လ။ ဒီနှင့်အတူငါသည်လည်းရေအများကြီးမသောက်စတင်ခဲ့သည်။ ထိုသို့တကယ်ငါ့အရေကိုရှင်းလင်းကူညီပေးခဲ့သည်။ ငါ့အဆွေခင်ပွန်း (မိန်းကလေးများပင်) ငါ၏အသစ်ကိုကြည့်အပေါ် (သူတို့ရဲ့ရည်းစားများ၏ရှေ့မှောက်၌) ငါ့ကိုချီးမွမ်း။
ငါကမိန်းကလေးတွေကိုမကြောက်တော့ဘူး၊ သူတို့ပတ်ပတ်လည်မှာအဆင်ပြေတယ်။ ဒါနဲ့ထူးဆန်းတဲ့အထီးကျန်ဖြစ်ခြင်းမှချစ်စရာကောင်းတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်အဖြစ်အသွင်ပြောင်းလိုက်တယ်။ NoFap သည်ထိုအသွင်ပြောင်းမှုတွင်အဓိကအခန်းကဏ္ had မှပါ ၀ င်ခဲ့သည်။ ငါမကြာသေးမီကမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုငြင်းပယ်ခဲ့သည်၊ သူသည်ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းဖြစ်သောကြောင့်သူမအပေါ်သူတို့၌ဤသို့သောခံစားချက်မျိုးမရှိခဲ့ပါ။ ငါအခုအချိန်မှာမိန်းကလေးတွေကိုရှာနေတာမဟုတ်ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော့်ဘဝကိုမှီခိုနေရတဲ့ဖေဖော်ဝါရီလမှာတကယ်အရေးကြီးတဲ့စာမေးပွဲတစ်ခုထွက်လာလို့ပါ။ ပြီးတော့ငါအာရုံမပျံ့လွင့်စေချင်ဘူး။
အဆုံး၌၎င်း၏အားလုံးသင်သည်သင်၏အသက်တာ၌နေ့စဉ်အခြေခံပေါ်မှာလုပ်ရွေးချယ်မှုများအကြောင်းကို။ နက်နဲရာအရပ်၌ချ, သင်ပြီးသားသင်၏ရွေးချယ်မှု၏ရလာဒ်ကိုငါသိ၏။ သင်သည်လက်ျာရွေးချယ်မှုလုပ်တိုင်းတစ်ခုတည်းအချိန်, သင်ကြောက်မက်ဘွယ်ခံစားရသည်။ သင်ကမှားယွင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုလုပ်တိုင်းအချိန်သင်ကိုယ်တိုင်အကြောင်းကို shitty ခံစားရတယ်။
ကြှနျတေျာ့ကိုနောက်ရည်မှန်းချက်ကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်ခြင်းကိုစောင့်ရှောက်ရန်, Hard Mode ကိုအပေါ်2နှစ်ပေါင်းပြုပါရန်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုကာလ၌ငါ့ကျန်းမာရေးနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအာရုံစိုက်ပါ။ ငါ၏အဇာတ်လမ်းကိုဖတ်ရှုဖို့အချိန်ယူပြီးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
LINK - Completed 90 နေ့ရက်များ! 🙂ခက် Mode ကိုအပေါ်2နှစ်ပေါင်းရည်မှန်း။ [ငါ့အသကျကိုချုပ်ဖော်ပြ]